MOETHIHAAUNG: ကမ်းဇော်ဆီနှင့် အစေ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အ၀ယ်လိုက်မှု ကြောင့် ဈေးကောင်းရလျက်ရှိ
ကမ်းဇော်ဆီနှင့် အစေ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အ၀ယ်လိုက်မှု ကြောင့် ဈေးကောင်းရလျက်ရှိ
ဆီထွက်သီးနှံ တစ်မျိုးဖြစ်သော ကမ်းဇော်သီးနှင့် ကမ်းဇော်ဆီသည် အလွန် ဆေးဖက်ဝင်သဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် သုံးစွဲသူ ပိုမိုများပြားလာသည့်အပြင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှပင် လာရောက် ၀ယ်ယူသောကြောင့် ကမ်းဇော်စေ့နှင့် ကမ်းဇော်ဆီ ဈေးကောင်းလျက်ရှိ သည်ဟု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့နယ်မှ ဒေသခံတစ်ဦးက The Farmer ကို ပြောသည်။
“အရင်က ၄၀ သားဝင် ဖန်ပုလင်း တစ်ပုလင်းကို ၂၀,၀၀၀ ကျော်ပဲရှိတယ်။ အခု တစ်ပုလင်းကို သုံးသောင်းခွဲ ကျော်လောက်ရှိ တယ်။ ကိုရီးယားက လူတွေလည်း လာဝယ်တယ်။ သူတို့က တိုင်းရင်း ဆေးတွေမှာ ထည့်သုံးတာ။ အခုဆိုရင် ဆီတောင် မကြိတ်တော့ဘူး။ အလုံးအတိုင်းပဲ ၀ယ်တော့တယ်။ တစ်ပြည်ကို ဈေးနည်းတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ၆,၀၀၀ ကျော်ရတယ်။ ရှားတဲ့ အချိန်ဆိုရင် တစ်ပြည်ကို ၈,၀၀၀ ကျော်လောက်ရ တယ်” ဟု ဒေသခံ မစိမ့်စိမ့်နွယ် ကပြောသည်။
သုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်းနှင့် အတူ ဈေးကွက်အတွင်း ကမ်းဇော်ဆီ အရောများ၊ အတုများ များပြား လာသဖြင့် ကမ်းဇော်ဆီ၏ ကျော်ကြားမှု နိမ့်ပါး လာရကြောင်း မြိတ်ခရိုင်၊ တိုင်းရင်းဆေး ပညာ ဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဒေါ်ဝါ၀ါက ပြောသည်။
“ကမ်းဇော်ဆီကို မြိတ်ခရိုင်မှာ သုံးလာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေပြီ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ပဉ္စမအကြိမ် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များ ညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးက “အစွမ်းထက် တိုင်းရင်းဆေး ကမ်းဇော်ဆီ” ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ဖတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကမ်းဇော်ဆီကို လူသိ များလာခဲ့တယ်။ ကမ်းဇော်ဆီကတော့ နှစ်စဉ်ပုံမှန် ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးစွဲတဲ့သူက ပိုများ လာတယ်။ မြန်မာ ပြည်တစ်ပြည် လုံးမှာ ကမ်းဇော်ဆီ အတု များလာတယ်။ ကြိတ်ဖတ်တွေ ပြန်ပေါင်းပြီး ရောင်းတော့ အာနိသင်နည်း လာတယ်။ အစစ် မရတော့ နည်းနည်း နာမည် ပျက်လာတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ကမ်းဇော်ဆီ စစ်ဖို့ အရေးကြီး ပါ တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကမ်းဇော်ဆီကို ၀မ်းဗိုက် အတွင်း တွင် ဖြစ်ပေါ် တတ်သော ရောဂါများ၊ အဖု အကျိတ်များ၊ အစာအိမ်အနာ၊ ချောင်းဆိုး သွေးပါရောဂါများ၊ အပူလောင်အနာများ၊ မီးပူလောင်ခြင်းများ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ မီးယပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုး၊ အစာမကြေ ပျို့အန် ခြင်း၊ အကြောရောဂါများ၊ နားအူခြင်း၊ နားအတွင်း အနာဖြစ်ခြင်း၊ နာတာရှည် လူနာ များ အိပ်ရာအပူလောင်နာဖြစ်ပေါ်ရန် အရေပြား နီမြန်းခြင်း စသည့်ရောဂါများ အတွက် အထူးသင့်လျော်သော ဆေးစွမ်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“တနင်္သာရီတိုင်းမှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် သားအိမ် ကင်ဆာဖြစ်တာ ခွဲ ခါနီးမှာ ကင်ဆာပြန့်နေလို့ မခွဲဘဲပြန် ပိတ်ခဲ့ ရတယ်။ ကမ်းဇော်ဆီကို သုံးတဲ့အခါမှာ ရောဂါပါ ပျောက်ပြီး ကလေးလည်း ပြန်မွေး လုို့ရသွားတဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ်းဇော်ပင်ကို တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြိတ်ခရိုင်နှင့် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အတွင်း၌သာ တွေ့ရပြီး ကုန်းပေါ်တွင် ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးကြောင်း ဒေါ်ဝါ၀ါက ပြောသည်။
“ပင်လယ် ကမ်းစပ်တွေမှာ ၊ ရွှံ့နွံ အိုင်တွေမှာ အပေါက် အရောက် များတယ်။ သူ့ဘာသာသူ အလေ့ကျ ပေါက်တယ်။ ကုန်းပေါ်မှာ ပေါက်တာနည်းတယ်။ အချို့ စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေမှာ ပေါက်နေတာတွေ ရှိတယ်။ စိုက်ပျိုးတာ မျိုးတော့ မရှိဘူး။ အခုတော့ မြိတ်က သစ်တော ဦးစီးဌာနက စိုက်မယ်လို့ ပြောတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကမ်းဇော်ဆီ၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ ‘Bassia Longifolia Linn၊ မျိုးရင်းမှာ ‘Sapotaceae’ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ အမည်မှာ ကမ်းဇော် (ရေမယ်ဇယ် - ရေမည်စည်)၊ အင်္ဂလိပ် အမည်မှာ ‘Mahua of Southern India’, ‘Mahua Tree’ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ကမ်းဇော်ပင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရွက်ပြတ်တောများတွင် ပေါက်ရောက်တတ်ပြီး အိန္ဒိယတွင် အပင်တစ်ပင်လျှင် ကမ်းဇော်ဆီ တန်ချိန် ၁၈၀,၀၀၀ ထွက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အပင်၏ ပျမ်းမျှအမြင့် ပေ ၇၀ အထိ ရှိပြီး ရှစ်နှစ်သားမှ ၁၅ နှစ်သားအတွင်း အပင်အရွယ် ရောက်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ အထိ အသီးသီးကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဒေသအများအပြားတွင် စိုက်ပျိုးကြကြောင်း နှင့် မည်သည့် မြေ အမျိုးအစားတွင် မဆို စိုက်ပျိုးနိုင်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် www.svlele.com/mahuae.htm တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြိတ်မြို့ရှိ ကမ်းဇော်ပင်သည် သုံးနှစ် တစ်ကြိမ် အသီးသီးကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
မိုးမိုးသူ (The Farmer journal http://thefarmermedia.com/ )
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း သတင်း
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသူများ ...
ဇီးရိုးမှ ဟီးရိုးဖြစ်လာတဲ့ အီသိယိုးပီးယား
Religious, civic organisations issue statement ove...
ဥပဒေစိုးမိုးရေး ကူညီဖို့ သမ္မတပန်ကြား
Unforgotable Radio Songs from BBS (Burma Broadcast...
ဒီမိုကရေစီခရီး နဲ့ ဆူးငြောင့်ခလုတ်များ
လမ်းကလေး မှာ မီးပုံးလေးတွေ ချိတ်ဆွဲတဲ့ည .. ။
မြိတ်မြို့၌ ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလု...
တောင်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေဟု မြောက်...
မလေးရှားရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကချင်ဒုက္ခသည်...
Shakers လား၊ -Movers လား၊- Doers လား
အာဏာရူးဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးပေးဖို့ ဇာဂနာ လက်ခံပြီ
အိန္ဒယမြန်မာ ဒီမိုကရေစီမိသားစုများရဲ့ သံချပ်များ
“ တာလီဘန်တွေရဲ့ကြေငြာချက်အပေါ် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲေ...
ထိုင်းအစိုးရ နဲ့ မူဆလင်သူပုန် ဆွေးနွေးပွဲစ
မငိုပါနဲ့ တိတ်ပါတော့ သျှိသျှားရယ်
တပ်မတော် ဂုဏံ အဟံဝန္ဒာမိ
မြိတ်မြို့ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အတွက် ကွန်ယက်ဖွဲ့စ...
မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ...
မြန်မာတွေ သတိမူစရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်...
‘Political Opportunists’ and ‘Religious Extremists...
President Thein Sein speech on current situations ...
တောင်ကြီးမြို့၊ ကန်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ မီးလောင်မှု
Who's Responsible? ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိလဲ
မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ဇီးကုန်းမြို့တွင်း မြင်...
တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပုတီးကုန်း ၊ မိုးညိုထိ ပြန့်ပြီ
ဒီနေ့နေ့လည်က အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဲခူးတိုင်...
၆၈ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ (တပ်မတော်နေ့) အခမ်းအန...
တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ပြည်တွင်းစစ် (Cival War)
မြန်မာ ၅ သိန်းလောက်ကို ဆော်ဒီက နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်
လက်ပံတောင်းသည် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမ...
သမီးဖြစ်သူကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သူကို အမှုဖွင့်...
မြိတ်မြို့  ကျက်သရေဆောင် လေးကျွန်းဆီမီးစေတီတော်ကြီ...
“အဆိုတော်မွန်းအောင် ရဲ့ နိုဘယ်လ်ဆု ကင်ပိန်း”
ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ တောင်ပိုင်းန...
အုတ်ဖို၊ မင်းလှ နင့် ကြို့ပင်ကောက်မြို့များတွင် ပု...
ရန်ကုန်မြို့ မှာ ကနေဒါသံရုံးဖွင့်တော့မည်
အံ့ချီးဖွယ် တောင်ပုလု ဆရာတော်ကြီး
သတိထားဖွယ်ရာ ကုသိုလ်အလုပ်များ တားမိရင်
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၍ ကရင်နီဒုက္ခသည် ၄၀ဦးကျော်သေ၊ ၂၀...
မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ငါးခုတွင် ဒုက္ခသည...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရမည်းသင်းမြို့နယ်၌ ဆူပူအကြမ်းဖ...
ဒီမိုကရေစီ ဇာတ်ခုံပေါ်က မှုံရွှေရည် မင်းသမီး
ကိုနေမျိုးဝေ ဥက္ကဌ (မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ...
Parliamentary Friends of Burma မှမိထ္ထိလာအရေးအခင်းအ...
မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွင် လူဆယ်ဦးထက် မနည်း တစ်နေ...
The True story of Meik Hti Lar incident
Troops impose uneasy calm on violence-torn Myanmar...
“ပွဲဖျက်ပြီးတော့ ကယ်တင်ရှင် ဝင်လုပ်မှာလား”
MIPSS War and Strategic Studies Paper (7)
နောက်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ နိင်ငံမှာ
ကျောင်းသားသူပုန်တို့ရဲ့ ခရီးရှည်အမှတ်တရ (အပိုင်း-၁...
ကားလ်မာ့က်စ်မိတ်ဆက် (အခန်း (၅))
နေပြည်တော် ငပွတွေ မိတ္ထီလာကို ပြာချပြီ
ယနေ့ နေ့လည် မိထ္တီလာအခြေအနေ ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ပြောကြ...
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းဆ...
မြိတ်(ဘိတ်) ရှစ် ဆယ့် ရှစ် အကြောင်း ပြောကြမယ်။
ပင်းတယမြို့နယ်ထဲမှာ တရားမ၀င်လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူကို ဖမ်းဆီးရမိ
ဇငျလငျး - နှဈသဈကူးပွနျပေါ့ …
ချ စ် လို့ေ ရးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၉ )